Kutarisa Nzvimbo Yako Saiti neKusarudzika Kutsvaga | Martech Zone
Kutarisa Nzvimbo Yako Saiti neKusarudzika Kutsvaga
Chitatu, December 16, 2009 Chishanu, February 10, 2017 Douglas Karr
Mumwe wevatengi vangu akafona svondo rapfuura uye akabvunza kuti sei, paakatsvaga, saiti yake yaive yekutanga mumatanho asi mumwe munhu akamuburutsa pasi peji zvishoma. Dai iwe usati wanzwa ruckus, Google yashandura kutsvaga kwega mhedzisiro zvachose.
Izvi zvinoreva kuti zvichibva pane yako yekutsvaga nhoroondo, zvawanikwa zvichasiyana. Kana iwe uri kutarisa ako wega masosi 'chinzvimbo, iwe uchaona kuti ivo vese akanyatso kuvandudzwa. Nekudaro, ivo vangango gadzirisirwa iwe uye hapana mumwe munhu. Kuti unyatsoongorora chinzvimbo chako, unofanirwa kudzima zvawatsvaga zvawanikwa
Pane nzira nhatu dzekudzima yakatarisana nekutsvaga:
Kuti uve nechokwadi chenguva pfupi kuti yabva, buda kunze kwechero ipi yeGoogle application yawakapinda. Sechiyero chakawedzerwa, batisa Yakavanzika Bhurawuza mubrowser yako (Zvese zvichangoburwa kubhurawuza zvine iyo .. yeIE, unofanirwa kunge uri paIE8).
Bvisa chero makuki kubva kuGoogle. Izvi zvichanyatso kukuisira kunze uko kwekutsvaga kusingaenzanisirwe munhu. Zvakare, Kuvhurika Kwakavanzika muSafari, Firefox kana IE8 inofanirwa kuve nemhedzisiro imwechete. MuGoogle Chrome, chimiro chinonzi Incognito kubhurawuza.
Kuti ubvise zvachose nhoroondo yako, pinda kune yako Nhoroondo yeGoogle Yekutsvaga uye chiremadza icho. Enda kuAccount yangu wobva wadzvanya Hora padyo neMiti Yangu uye tinya Delete Webhu Nhoroondo zvachose. Kana yako nhoroondo ikadzimwa, hapana nzira dzekuita yako yekutsvaga mhinduro. Ungangoda kuita izvi kazhinji.
Kana iwe uchinyatsoda kuti zviitire nyore pauri, ini ndaikurudzira kuchinjira kune (zvinosetsa) Google Chrome. Unogona kuvhura Incognito Window (ctrl-shift-N) uye haizowana nhoroondo yako yekutsvaga kana kumisikidza makuki… iwe unozogona kugara wakabatana muGoogle pahwindo rimwe uye incognito muhwindo idzva. Ndiwo matorerwo andaita pamusoro apa… ndakasarudzika kuruboshwe uye ndisina kuitwa munhu kurudyi muhwindo re incognito.
Iko mukana weGoogle Chrome ndeyekuti iyo Kuvhurika Kwakavanzika maficha emamwe mabhurawuza anoita ese windows zvakavanzika. Iwe haugone kuve nezvimwe zviripo uye zvimwe zvisiri. Chrome yaita basa rakanaka mukuita izvi kusagadzikana.
Ramba uchifunga kuti izvi zvichiri hazvipe zvakakwana kunyatsoita. Chishandiso chako nenzvimbo yako zvichakanganisa mhedzisiro. Kuti utarise zvechokwadi pamatanho ako, unogona kuona Google Search Console uye ini ndinokurudzira zvikuru kuti unyore kune Semrush.
Tags: kutarisa chepamusoroincognitokeyword chepamusorokeyword kuerakutsvagisa munhu zvichienderanachepamusorotsvaga injini peji pejiyekutsvaga injini mhinduro peji chinzvimbonyokachinzvimbo che serp
Padivi NeVatengi Vako
Dec 17, 2009 pa 8: 48 AM
Doug, makorokoto! Ndiwe munhu wekutanga kukurudzira kushandisa icognito kubhurawuza zvimwe zvisiri pachena 🙂
Zvita 17, 2009 na6: 36 PM
Iyo incognito inoshanda seyakanaka here sekushambadzirwa?
(uye nei ndisingakwanise kushandisa ID yangu yemazita kutaura?)
Ndira 7, 2010 na12: 27 PM
Iyi ndeimwe yeaya akareruka sei-kutumira izvo zvakangomira mumusoro mangu. Saka, nhasi apo ini ndaida iyi info, yaive nzira iri nyore kuivhima uye kushandisa iko kudzidza. Kutenda iwe, ini ndatorodha pasi Chrome uye ndashandisa Incognito mapeji kuyedza kumwe kutsvagurudza. Ndatenda!